Diplaomaty Toniziana maty noho ny horohorontany tany Haiti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2010 6:15 GMT
Revo tamin'ny fifandonan'ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra Toniziana sy Zambia ireo Tonisiana omaly alina, torak'izany koa ireo mpitoraka blaogy. Tonga nanohana ny fireneny daholo ireo mpankafy baolina kitra, izay mandray anjara amin'ny Tompon-dakan'i Afrika ho an'ny Tompon'Amboara (CAN 2010) Sokajy D, any Lubango.
Raha ny isan'ny lahatsoratra nivoaka omaly dia tena vitsy noho ny mahazatra ary vitsy ireo olona no nanoratra mikasika ny horohorontany niseho tany Haiti. Ireo izay manoratra izany dia miresaka momba ny fahalasan'i Hedi Annabi, 66 taona, diplaomaty Toniziana ary Solontena manokana avy amin'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana ho any Haiti (Minustah).
Adibs1 dia namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe: Ny horohorontany tany Haiti: Tsy hita i Hedi Annab, Toniziana lehiben'ny MINUSTAH. Miteny izy hoe:
Omaly tamin'ny 11 alina ora any an-toerana, 5 hariva any Haiti, dia nisy horohorontany mahery nanana tanjaka 7.0 amin'ny maridrefy Richter namely mafy ny nosin'i Haiti izay nahafatesana aman-jatony ary niteraka fahasimbana goavana.
Ny foiben-toeran'ny Firenena Mikambana dia potika tanteraka, Tafika misatro-manga an-jatony no voalaza fa tsy hita , ao anatin'izany ny lehiben'ny Minustah, diplaomaty Toniziana: Hedi Annabi.
63 taona, Annabi dia diplaomaty Toniziana manana toerana ambony . Izy no nitantana ny asa fampandrian-tany niaraka tamin'ilay Frantsay Jean-Marie Guéhenno hatramin'ny 28 Janoary 1997.
Stupid ideas nanoratra lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Angamba maty ny solontenan'ny Firenena Mikambana any Haiti. Miteny ilay mpitoraka blaogy ao amin'ity lahatsoratra ity:
Araka ny Yahoo , dia maty ny Toniziana iray solontenan'ny Firenena Mikambana. Irariako mba ho diso izany vaovao izany, nefa araka ny lahatsoratra dia anisan'ireo olona tao anatin'ny tranon'ny Firenena Mikambana i Mr Hedi Ananbi, mpanampy ny sekretera jeneraly teo aloha tamin'ny Ezaka Fampandrain-tany nanomboka ny 1997 hatramin'ny 2007 ary solontena manokan'ny Firenena Mikambana ho any Haiti (MINUSTAH) hatramin'ny 1 Septambra 2007, tamin'ny nisian'io horohoron-tany izay namely ny tanana io . Maty daholo ireo olona rehetra tao anatin'izany tranobe izany.
Ny eritreritro manontolo mankany amin'ny fianakaviany.